Uar Um Kho Tuk E : Sandah A Piak Mi An Paw A Tam Lai A Ti I A Pek Mi Hna Cu (+Hmanthlak Pawl) – Onlinenungak
Uar Um Kho Tuk E : Sandah A Piak Mi An Paw A Tam Lai A Ti I A Pek Mi Hna Cu (+Hmanthlak Pawl)
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ….အခုတစ်ခါမှာတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးလို့ အထင်မှားရလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းပြီး ချောမောလှပတဲ့ သူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ နန်းစုရတီစိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ အချိန်အတော်ကြာအောင် အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်အောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိလည်း သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်လက်အားပေးနေကြတုန်း ဖြစ်ပါတယ်နော်……။
နန်းစုကတော့ သရုပ်ဆောင်ရာတွင် ပီပြင်ရုံသာမက အဆိုပိုင်းတွင်လည်း ထူးချွန်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေကို ချပြပေးလေ့ ရှိတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်လည်း သူချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ရဲရင့်စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကာ ပြည်သူတွေကိုလည်း သူမကူညီနိုင်သလောက် ပေးဝေလှူတန်းနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
နန်းစုရဲ့ လူမူကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင်တော့ “Foods & drinks support for our heros! မုန့်တွေ ရေသန့်တွေ ဝေ အမှိုက်တွေ လိုက်သိမ်း တတ်နိုင်သလောက်လေး ပါဝင်ကူညီ နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသူများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေ Keep Fighting !!!!!!! #savemyanmar”ဆိုတဲ့ စာသားလေးတင်ကာ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေကလည်း နန်းစုကို ထပ်ပြီး ချစ်ခင်အားပေးမှာမို့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..။